४ खेलाडी जसले राजस्थानलाई कीर्तिमानी लक्ष्य भेटाउन अहम योगदान दिए – WicketNepal
WicketNepal Staff, २०७७ आश्विन १२, सोमबार ०१:३४
आईपीएल टि-२० अन्तर्गत आइतबार राति सम्पन्न खेलमा राजस्थानले आईपीएल इतिहासकै सर्वाधिक लक्ष्य पछ्याउदै लगातर दोश्रो जित हाँसिल गर्यो। पन्जाबले दिएको २२४ रनको विशाल लक्ष्य स्टिभ स्मिथ कप्तानीको टिमले ३ बल बाँकि रहँदै ६ विकेट गुमेर भेटायो। राजस्थान आफैले १२ वर्ष अघि बनाएको सर्वाधिक लक्ष्य पछ्याउने रेकर्ड लामो समय पछि आफैले तोड्न सक्यो। अपत्यारिलो जस्तो देखिने लक्ष्य पछ्याउने क्रममा ४ जना राजस्थान ब्याट्सम्यानहरुले उत्कृस्ट योगदान दिए –
१. सन्जु स्यामसन
लिगमा लगातार दोश्रो खेलमा अर्धशतक बनाउने क्रममा आक्रामक ब्याटिंग गरेका स्यामसनले विशाल लक्ष्य पछ्याउने क्रममा ४२ बलमा ८५ रन बनाए जुन क्रममा ४ चौका र ७ छक्का हिर्काए। जोस बटलर मात्र ४ रन बनाएर आउट भएपछि टिमलाई साझेदारीको खाँचो थियो भने आक्रामक इनिंग पनि उत्तिकै आवस्यक। तेश्रो ओभरमा ब्याटिंग गर्न आएका स्यामसनले १७ औं ओभरमा आउट हुनु अघि कप्तान स्टिभ स्मिथसंग ८१ रनको तथा राहुल तेवतियासंग ६१ रनको साझेदारी गर्दै जितको आधार तयार गरे। यस क्रममा दायाँ हाते ब्याट्सम्यानले ग्लेन म्याक्सवेलले गरेको १६ औं ओभरमा ३ छक्का प्रहार गरेका थिए। खेलको प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका स्यामको इनिंग बिना लक्ष्य पछ्याउनु निकै मुस्किल थियो।
साथी ओपनर बटलरको विकेट छिट्टै गुमे पछि कप्तान स्मिथले सन्जु स्यामसनसंग ८१ रनको साझेदारी गरे। त्यस क्रममा मात्र २७ बलमा ७ चौका र २ छक्का मद्दतले स्मिथले ५० रन बनाए। लक्ष्य पछ्याउने क्रममा सुरुवाती विकेट नगुमाउनु महत्वपूर्ण थियो जुन जिम्मेवारी स्मिथले राम्रोसंग निभाए। स्मिथ र स्यामसनले पहिलो पावरप्लेमा ६९ रन बनाउदै शानदार सुरुवात दिलाएका थिए।
३. जोफ्रा आर्चर
बलिंगमा ४६ रन खर्चेर विकेटविहिन रहेका आर्चरले ब्याटिंगमा राम्रो योगदान दिए। जित नजिक पुगेर राजस्थानले १९ औं ओभरमा रोबिन उथप्पाको विकेट गुमाउदा फेरी टिमको लय गुम्ने आशंका थियो। तर १९ औं ओभरमा उत्कृस्ट बलिंग गरिरहेका फास्ट बलर मोहम्मद शामीलाई उनल क्रिजमा आउने बितिक्कै २ वटा छक्का प्रहार गरे जसले आवस्यक रन निकै कम भयो। ११ बलमा २१ रन आवस्यक हुँदा आर्चरको २ छक्कापछि टिमलाई ९ बलमा मात्र ९ रन आवश्यक भएको थियो। आर्चरको विकेट गुमाएको भए टिमको लय गुम्ने खतरा थियो जसले टिममा अझ दबाब हुने थियो। आर्चरले अविजित रहने क्रममा मात्र ३ बलमा २ छक्का प्रहार गर्दै १३ रन बनाए जसको बलमा टिमले ३ बल अगावै खेल जित्न सक्यो।
४. राहुल तेवतिया
– ३१ बलमा ७ छक्का मद्दतले ५३ रन बनाउदै जितमा नायक बनेका तेवतियाले इनिंगको सुरुवात निकै सुस्त गरेका थिए। स्टिभ स्मिथ नवौं ओभरमा आउट भएपछि ब्याटिंग गर्न आएका देब्रे हाते ब्याट्सम्यानको रन भन्दा बल बढी थियो। तर उनले अर्को किनारमा आक्रामक ब्याटिंग गरेका सन्जु स्यामसनलाई अर्को किनारमा विकेट खस्न नदिई साथ दिए र स्यामसनसंग तेश्रो विकेटको लागि ६१ रनको साझेदारी गरे। तर १७ औं ओभरमा स्यामसन आउट भएपछि भने तेवतियाले गेर परिवर्तन गरे। स्यामसनको विकेट जाँदा २१ बलमा उनले मात्र १४ रन बनाएका थिए। तर त्यसपछि १८ औं ओभरमा उनले खेलनै परिवर्तन गर्ने ब्याटिंग गरे।
१८ बलमा टिमलाई ५१ रन आवस्यक हुँदा उनले शेल्डन कटरेलको ओभरको पहिलो ४ बलमा लगातार छक्का प्रहार गरे भने छैठौं बलमा अर्को छक्का प्रहार गर्दा ओभरमा ३० रन बनाए। त्यसपछि १९ औं ओभरमा मोहम्मद शामीलाई छक्का प्रहार गर्दै उनले ३० बलमा ५० रन पुरा गरे। जित्नको लागि २ रन बाँकी हुँदा उनि शामीको बलमा क्याच आउट भए तर त्यसको अगाडी उनले टिमलाई जित्ने अवस्थामा पुर्याईसकेका थिए।